[Hevitra] Gnome 3: Ny amin'ny ratsy sy ny tsara | Avy amin'ny Linux
[Hevitra] Gnome 3: Ny amin'ny ratsy sy ny tsara
Tsy maintsy ekeko fa indraindray ny hevitro momba gnome 3 henjana tokoa, niampita ity Tontolo iainana Desktop imbetsaka toy ny tsy fahombiazana lehibe. Tsy tiako hisy hieritreritra hoe misy zavatra manohitra ahy manokana GNOME. Mety nisy fotoana nanatsoahana hevitra faran'izay haingana. Lazaiko anao ny antony.
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay dia niasa efa ho amin'ny fotoana feno aho KDE ary tena matetika (toy izao) Mampiasa aho Xfce. Izaho dia iray amin'ireo mpampiasa izay mankaleo haingana ny fananana zavatra mitovy foana, noho izany tiako ny manova ny tontolo iainana, fotoana misy vokany, fotoana tsy misy azy ireo, sns.
Lazaiko anao izany, satria KDE y Xfce Manana zavatra iraisana izy ireo: Tsy nanova ny fomba fiasan'izy ireo mihitsy izy ireo, izany hoe, ny fomba ifandraisantsika amin'ny birao, ny fandaminana ireo singa ao aminy, ny fomba fidirantsika amin'ireo rindranasa ... sns, zavatra iray izay Akorandriaka gnome Izy io dia nanova ny endriny vaovao ary nahatonga ny fandavana olona an'arivony.
2 ny fiasa izany
Na dia ekeko sy ekeko aza fa ny interface of GNOME Toa natao / novolavolaina ho an'ny fitaovana finday izy io, ekena ihany koa fa manome maso mahafinaritra ny maso ny maso.
Ambonin'izany rehetra izany dia manana zavatra tiako izy io, ny rafitry ny fampandrenesana vaovao, izay mamela antsika hamaly hafatra aza tsy mila manokatra varavarankelin'ny mpanjifantsika mandefa hafatra, isaky ny mampiasa izahay fiaraha-miory na fanitarana sasany ho an'ny Pidgin. Tsy misy hafa Tontolo iainana Desktop manana zavatra mitovy izy io, hevitra tena tsara sy mahasoa tokoa.
Mbola mino aho fa ny lohahevitr'i Akorandriaka gnome Tokony hahazo fanitsiana maika izy io, indrindra rehefa nahita volavola tena tsara azo ampiasaina amin'ny toerana tsy misy olana, noforonin'ny antoko fahatelo.
Ny lohahevitra ho an'ny reny (ny mpitantana ny varavarankely) mety hahazo fanovana kely ihany koa izy io, ny haben'ny bokotra akaiky / mampihena dia azo ahena kely ... sns. Azo antoka, raha mieritreritra fitaovana finday isika, dia misy dikany fa lehibe dia lehibe izy ireo, saingy mieritreritra aho GNOME Mbola miparitaka ao amin'ny birao birao izy io, ka tsara raha manana variant iray farafaharatsiny ampifanarahana amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny default.
Tsy mizara an'io filozofia vaovao iorenan'ireo mpamorona io aho GNOME fa ny fitaovana fanamboarana dia tsy ampidirina amin'ny alàlan'ny default satria efa milamina toy izao ny birao. Zavatra tsy hahagaga ahy izany Apple o Microsoft, saingy tsy isalasalana fa tsy nampiavaka ireo latabatra misy velively GNU / Linux.
olona (tsy misy ankapobeny) Manana izany voajanahary voajanahary izany isika handavana ny fanovana izay manova ny fanaontsika mahazatra sy ny fomba fanaovantsika zavatra.
Araka ny efa fantatsika, Akorandriaka gnome manome fomba vaovao hampiasana sy hifandraisana amin'ny birao, mety tsara ho an'ireo mpampiasa izay te-hanao tsy misy totozy, mampiasa fampiasa amin'ny keyboard manokana.
Raha tsy mampiasa solosaina misy fampisehoana tsara ianao dia mbola somary miadana sy sarotra ihany ny fomba idirana ireo rindranasa, tsy maintsy soratanao anaty motera fikarohana. Azo antoka fa azontsika atao foana ny manana azy ireo eo amin'ny Dock havia na mampiasa hitsin-dàlana fitendry hanombohana azy ireo, saingy farafaharatsiny mba malahelo ny fananako menio handefasana azy ireo amin'ny tsindry iray.
Tsy mampahazo aina ahy koa ny tsy mahita ireo varavarankely rehetra nosokafako sy nahenaiko tao amin'ilay takelaka, ary afaka nifamadika tamin'izy ireo niaraka tamin'ny cursor totozy. Ampiasao ny fitambarana manan-danja amin'izany Tab + Alt na tsy maintsy mampiasa ny fahitana Topimaso, Tsy dia mahazo aina loatra aho milaza izany. Andininy izay azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fampiasana extension.
Ny fampiasana ny fanitarana dia nanjary malaza amin'ny fampiharana noho ny Firefox. En GNOME, dia namorona mekanika hampiasa ireo fanampiana ireo arak'izay ilainay. Saingy heveriko fa misy olana roa lehibe amin'izy ireo ankehitriny:
Tsy nahavita namorona fomba milamina izy ireo ka isaky ny fanavaozana ny birao dia tsy tapaka ny fanitarana ampiasaina, izay mitondra antsika any amin'ny faharoa.
Mila fampiasana be loatra azy ireo mba hahafahana manaingo ny Shell kely araka izay itiavantsika azy.
Araka ny holazaintsika eto amin'ny fireneko, mety nisaina tsara ilay hevitra, saingy tsy dia novonoina. (tsara eritreretina, novonoina mafy). Mazava ho azy, angamba ny fahadisoana dia miankina amin'ireo mpamorona tenany izay manova ny antsipirian'ny API isaky ny fanavaozana ny birao, zavatra iray izay tokony ho marin-toerana tsy hiteraka fifandonana.
Saingy avelako any ambadika any daholo ireo, heveriko GNOME hanana fanekena bebe kokoa izany, raha mijanona ny fiovana rehetra ankehitriny fa mifantoka amin'ireo mpampiasa solosaina. Amin'ny farany dia azonao atao ny mizatra amin'ny fanovana, fa tsy amin'ny zava-misy fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra.
Efa hitantsika ny fanovana nataon'izy ireo Nautilus ambanin'ny fialan-tsiny fa tsy mandeha tsara amin'ny fitaovana finday izy ireo ary amiko, izany GNOME Mbola lavitra ny lalana aleha hanana toerana amin'ity karazana artifact ity, ka tsy tokony handany ezaka be izy ireo.
Fa aleo atrehana fa tsy ny ratsy rehetra. Ny fanesorana ireo lesoka rehetra nolazaiko teo aloha ireo dia heveriko gnome 3 Io no iray amin'ireo tontolon'ny birao maoderina indrindra eto izao, ary azoko antoka fa afaka manatsara be izany ary mamonjy faty efa nambara mialoha.
Heveriko fa ny lesoka dia tsy tao amin'ilay hevitra sy ny fiovana ao ambadiky ny Shell, fa ny zava-misy tsotra manadino izay mpampiasa tokony hifantohany.
GNOME Na ho tsara na ho ratsy, dia manohy manolotra fitaovana tena tsara ho an'ireo mpampiasa azy, ary izaho, amin'ny mpampiasa azy taloha, dia maniry ny hahalasa indray ny tany very, satria amin'ny farany, hahazo tombony be indrindra amin'ny fananana safidy hafa tena tsara ho an'ny fizarana tiany. Noho izany, na dia tsy ampiasaiko aza izany, raha te hiteny aho ho an'ireo izay mampiasa: Ho ela velona Gnome !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » [Hevitra] Gnome 3: Ny amin'ny ratsy sy ny tsara
"Tsy nanova ny fomba fiasan'izy ireo velively"
Ahem, tadidio ary ho tadidinao fa ny fanahy dia nientanentana be rehefa nivoatra tamin'ny zavatra hafa tsy mitovy amin'ny an'ny 3.5 ka hatramin'ny sampana 4 i KDE, ao anatin'izany i Linus mihitsy no nilaza fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nihombo izy ireo, fa ny KDE4 dia banga, tsy azo ampiasaina, bla, bla , blah, mitovy tanteraka amin'ny ankehitriny amin'ny GNOME 3 / Shell.
Ho ahy, isaky ny mahita neophytes miteny aho mba hitadiavana resaka - satria vitsy ny olona manana ny fahaizany misaina- Mitovy ihany ny lazaiko: AOKA IREO DEVS FUCKING DEVS.
Ny GNOME 2.32.2 dia tsy tonga tampoka, dingana lava io izay nanjary azo nampiasaina tokoa ny birao avy amin'ny kinova 2.20 eo ho eo., Toy izany koa no mitranga amin'ny GNOME3 ary toy izany koa no nitranga tamin'ny KDE4. Averina indray: avelao ny devs hiasa.
Ho ahy, ny GNOME3 / Shell dia toa tanjona lehibe foana, na dia ekeko aza fa manintona ahy be ny kanelina - ny zavatra tsara indrindra dia ny kanelina IS GNOME 3 ...
Raha ny tena izy, raha teo amin'ny haavo fampandrosoana ny KDE3 ny GNOME4 dia tsy hisalasala aho hisintona segondra hifindra monina, toa tsy dia milamina kokoa sy matanjaka kokoa ny GNOME raha oharina amin'ny KDE, na dia mifanohitra amin'izany aza, ny fampiharana KDE dia mahery vaika kokoa noho ny fampiharana GNOME, fa tsy ny spartan miaraka amin'ny safidy kely indrindra.
Lahatsoratra tsara eLav, henoy aho, mahareta fa tetik'asa tsy mampino izany. Oh, ary misaotra tamin'ny valin'ny forum Squid! 😀
* PS: ilay tsy mieritreritra hoe manokatra vava tahaka ny boaty mailaka dia i Linus, tsy afaka mivoaka hiresaka momba ny PNN mahalala ny lanjan'ny eritreriny ao anatin'ny vondrom-piarahamonina izy ary ambonin'izany rehetra izany, mahafantatra ny tenany ho mpamorona fa GNOME3 dia amin'ny diapers ary izany dia tsy misy afa-tsy amin'ny kinova 3.8 na 4 an'ny zava-bitan'ny ekipa GNOME ho an'ity kinova vaovao amin'ny birao ity dia hanomboka ho hita mazava kokoa.
Raha gid00 nXNUMXb izy dia ekeko fa miteny tsy misy dikany izy, fa i Linus kosa tokony refesina kokoa.
Tsy dia azoko tsara. Neophytes ve ireo mitsikera ny GNOME Shell? Ary i Linus ve no "lantom-peo" na ankanavaka manaporofo ny lalàna? Heveriko fa hafa koa i Alan Cox. Tsy mitsaha-mitombo ny fitsikerana ireo mpitsikera GNOME. Manantena aho fa hamindra ny toe-draharaha ho tombontsoany manokana izy ireo.
Alan Cox: Miovaova izany. Safidy mazàna aho dia mihazakazaka xfce fa matetika kosa dia mihazakazaka ny Gnome + nautilus natsangana ary indraindray KDE satria be dia be ny fotoana lany amin'ny beta fitiliana ireo famoahana vaovao. Ny fomba tokana tsara hanandramana beta famotsorana vaovao dia ny fitantanana azy.
Toa lozika amiko fa tsy tiany ny GNOME3 satria tsy mitovy amin'ny nampiasainy izany, toy ny hoe mivoaka tampoka miaraka amin'ny conduction tariby ny maodelin'ny fiara tianao indrindra (izany hoe, ny familiana dia soloina kitiho ny F-1, zavatra izay tsy dia lavitra ampiharina) ary amin'ny fanovana mandeha ho azy ihany, ho antsika "vy" dia ho sarotra amintsika ny hitelina an'izany marketing ho an'ny vehivavy izany = D
Ny lazaiko dia ny olona afaka mitaona olona izay miofana fotsiny fa tokony hanana haingo sy fahendrena kely kokoa rehefa manokatra ny vavany, tsara tahaka ny fisokafan'izy ireo rehefa mitsikera tetikasa rindrambaiko malalaka izy ireo.
Ny zavatra iray dia ny tsiro manokana an'ny tsirairay ary ny iray hafa dia ny adihevitra ara-teknika sy ny zava-misy mifototra amin'ny zava-misy.
Andao hojerentsika, azo antoka, heveriko fa hanaiky isika rehetra fa ny làlan'ny cinnamon dia mandeha amin'ny làlan'ny _ tsara indrindra, amin'ny lafiny rehetra ... dia hita fa ny Cinnamon dia fanaingoana GNOME3 miaraka amina fanampim-panazavana, io dia sosona napetraka eo an-tampon'ny GNOME3, noho izany fantaro ny herin'ny GNOME3 sy ny fahafahany tsy manam-petra: ECMAScript / HTML5 / CSS3 - io no birao amin'ny ho avy ary toy izany koa ireo rehetra mialoha ny fotoanany.
"Mivonto i Sancho, milaza fa mandroso isika."
Tsara ho an'ny sasany ny mamaky an'i Don Quixote alohan'ny hitsikerana ...
* tianay izy ireo
Mino aho fa efa mahatakatra. Ireo izay mitsikera ny GNOME Shell dia olona efa zokinjokiny tsy mahay mizatra amin'ny vanim-potoana vaovao. Izany ve?
Raha ny amiko dia fantatro ireo tombony rehetra voalazanao avy amin'ny GNOME 3 ary tsy hitako ny antony manakana ny fitsikerana ny fizotran'ny tetikasa ankehitriny miaraka amin'ny GNOME Shell. Mahazatra ve i Nautilus ny mihemotra? Raha tsy mitsikera azy ireo isika izao, dia hidona ao anaty valin-drivotra i "Don Quixote de la Mancha".
«Mihevitra aho fa efa mahatakatra. Ireo izay mitsikera ny GNOME Shell dia olona efa zokinjokiny tsy mahay mizatra amin'ny vanim-potoana vaovao. Izany ve? "
Haha, tsia, tsy izany mihitsy, ny fahazarana mampiasa rafitra fotsiny no lazaiko 🙂
Ara-dalàna ve ny hiverenan'i Nautilus? »
Hadinoko ny momba an'i Nautilus !! Marina tanteraka ianao, mihoatra ny sambo mpisitrika ilay Nautilus vaovao dia bathyscaphe - ity ohatra noresahinao ity dia nahatonga ahy ho kivy manokana 🙁
Tiako i coan alan dia hoy izy:
Ny fanovana an'i Kde3 ho Kde4 dia tsy azo ampitahaina amin'ny fanovana Gnome ankehitriny, tao Kde dia nisy ny tsy fahafaha-manao noho ny fanovana mahery vaika an'ny Qt.
Ary toy ny nilazana fa ny kinova 4.0 dia ho beta (Saingy nisy fizarana sasany nandalo an'io) ary nampiana tsikelikely ny safidy rehetra, avy amin'ny 3.5 taloha sy ireo safidy vaovao.
Ny Gnome dia tsy birao akory - tetik'asa fikarohana.
Valiny ho an'i Alan Cox tiako
Gnome-shell dia maharikoriko amin'ny Desktop Computers Mihevitra aho amin'ny kahie fa toa tsara izany ary azo ampiasaina nefa tsy amin'ny Desktop na Laptop lehibe.
Tsy misy azo atao, nampiasa ny Mint 12 nandritra ny fotoana fohy teo amin'ny birao iray tany am-piasana aho, izay nesoriko ny bara farany - ny famindrana ny applet ho any ambony - ary io no birao tsara indrindra nananako nandritra ny taona maro momba ny fampiasana, ny fahafaha-mamindra ary ny haingana , In-100 haingana kokoa noho ny ankehitriny ahy KDE SC 4.9 amin'ny Arch - izay indray mandeha matetika dia imbetsaka haingana kokoa noho ny sisa amin'ny KDE any ivelany.
Ary amin'ny fanarahana ny rohy Tips & Tricks ao amin'ny forum Mint hanamboarana ny rafitrao dia azonao avela tanteraka araka ny itiavanao azy ity amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny lohahevitr'ireo sary masina goavambe, sns.
Holazaiko kely fotsiny fa mbola tsy nolazainao izany, ka amin'ny ankapobeny dia zavatra iray no holazaiko: tiako be ny Gnome Shell ho an'ny solosaina finday, hitako fa mahazo aina izy, ary rehefa mametraka lohahevitra vitsivitsy dia lasa tsara tarehy ihany koa. Ho ahy izany no drawback lehibe indrindra, tsy afaka manova sary masina, lohahevitra gtk sy ny hafa amin'ny tsindry ny totozy.
Amin'ny maha mpampiasa gnome ahy dia tena kely fotsiny ny zavatra fantatro momba ny gnome 2.xx saingy azoko lazaina fa tsy nanana "be" izy io izao niaraka tamin'ny gnome 3 zavatra tsara nohatsaraina, saingy tamin'ny fomba tsy dia nahafinaritra an'ny maro sy vitsy noho ny zavatra hafa noho ny "minimalism" izay entiny na dia somary mangidy aza ny traikefa, satria manohy mamolavola an'ity tontolo ity izy ireo amin'ny alàlan'ny famolavolana izay amin'ny teôlôjia izay mbola tsy vitany tamin'ny gnome 2 mihitsy, hamaranana satria ireo no latabatra misy ankehitriny, tsy velona avy amin'ny ny lasa sa ny ho avy.
rafuru dia hoy izy:
Io antsipiriany io fa tsy misy menio fampiharana no tiako indrindra momba ny gnome.
Haingam-pandeha sy mavitrika kokoa ny fanindriana ny lakilen'ny super, manorata litera roa na telo amin'ny programa hanokafana sy hidirana.
Raha tokony tsindrio ny menio, mijery sokajy, mijery ny lisitry ny programa ary kitiho hanokatra
Mamaly an'i rafuru
Sep fa mitranga izany raha fantatrao izay tadiavinao, raha tsy izany dia mila mampiasa ny tsipika fitetezana ianao mba hikarohana na hanivana ireo rindranasa amin'ny alàlan'ny super + fikitihana ireo rindranasa + fanindriana ny sokajy heverinao fa ... sns .
Izy ireo dia fanontaniana momba ny toe-javatra.
Raha ny marina, raha manana menio izy ary io no fomba fijerin'ny fampiharana, dia toy ny hoe misy hatrany ny menio fangatahana fa ao anatin'ny fijerin'ny hetsika, ao amin'ny Gnome 3.6 dia hiova izy ary raha tokony ho toy ny teny dia ho lasa bokotra ao anatin'ny dash izay hidiranao amin'ny menio fampiharana ihany koa
Nanandrana nifanaraka tamin'ny Gnome Shell imbetsaka aho fa tsy tamin'ny fahombiazana velively. Mifanohitra amin'izany, ny tontolo toy ny Kanelina, na dia mahazatra aza, dia mampifanaraka izay antenaiko rehetra avy amin'ny birao Gnome tsara ary amin'ny fotoana tsy ampoizina ato an-trano. Heveriko fa tsara ny fanandramana, saingy tsy tokony terena ny fanovana. Raha izy ireo no namorona ny akorandaka tamin'ny lafiny iray ary tontolo iainana mahazatra (fomba Gnome 2) etsy ankilany, dia samy hafa be izao ny zavatra.
Raha ny fanazavana, na dia tsy izany aza, vao tsy ela akory izay dia nahita akorandriaka Qt tena mahaliana aho, avy amin'ilay mpamorona an'i Bespin. Antsoina hoe BE :: Shell izy io, ary maivana sy azo alamina ihany. Te hanana fidirana momba an'io aho, saingy noho ny tsy fahampian'ny fotoana dia avelako hisokatra ho an'izay liana ny varavarana.
@Wolf: Azoko tsara ianao nefa mieritreritra fa noho ny loharanom-pahalalana voafetra ananan'ny tetikasa rindrambaiko maimaimpoana dia tsy azo atao ny mitazona tontolo birao lehibe roa sy tsy mitovy amin'ny an'ny GNOME sampana 2 sy 3, ankehitriny dia tsy mamorona Fallback akory izy ireo.
Azo antoka fa tsy maintsy nandray ny fanapahan-kevitra izy ireo tamin'ny fotoana nahalalana fa fikomiana ho avy io nefa dia niroso izy ireo, izay milaza * betsaka * momba ireo mpitarika ny tetikasa sy ny fahitan'izy ireo izany.
Efa nanamarina ny BE :: Shell aho, toa tsara fa ny tena marina dia tsy mampiasa KDE aho ary tsy manam-potoana hametrahana distro izay efa manana BE :: Shell ao amin'ny repo na hametraka azy amin'ny sasany + KDE xD
Amin'izao fotoana izao dia nanandrana nametraka azy aho fa tsy afaka. Mahazo lesoka aho rehefa manatanteraka make.. Shit, mahafatifaty ny endriny ... 🙁
Marina izany, toa tsara.
elav, miombon-kevitra aminao aho amin'ny zava-drehetra afa-tsy ny halgo ary ny varavarankely amin'ny topy topimaso dia hevitra tsara satria raha vao nanokatra isaky ny varavarankely ianao ary eny, hevitra lehibe iray ohatra ny akorandriaka Gnome an'ny Deepin Linux izay majika
Mampiasa Arch misy gnome Shell aho ary ny marina dia io no tena mety amiko, haingana sy maivana izy io, fotoana.
Ambonin'izany rehetra izany dia manana zavatra tiako izy io, ny rafitry ny fampandrenesana vaovao, izay ahafahantsika mamaly hafatra akory nefa tsy mila manokatra varavarankely an'ny mpanjifantsika fandefasana hafatra, raha toa ka mampiasa Empathy na extension amin'ny Pidgin izahay. Tsy misy tontolo iainana Desktop hafa manana zavatra mitovy amin'izany, hevitra tena tsara sy mahasoa tokoa.
Ny KDE dia manana zavatra mitovy amin'izany noho ny KDE Telepathy:
KDE tsara, ratsy loatra Telepathy dia mbola maitso kokoa noho ny akondro ..
Efa nanandrana aho ary mandeha. Azo hatsaraina (toy ny GNOME Shell).
Tsy fantatro izany raha hamaly amin'ny fampandrenesana.
na dia miaiky aza aho fa tsy tiako ireo fampandrenesana etsy ambany ao anaty akorandriaka ... soa ihany aho fa nahazo extension izay mametraka pidgin sy skype eo amboniny mba tsy ho very aho rehefa miresaka amiko ry zareo
Tena tiako ny akorandriaka gnome, ampiasako isan'andro ao an-trano, any am-piasana dia mampiasa ubuntu miaraka amina firaisan-kina.
Tiako kokoa ny akorandriaka na dia misy lesoka hafa aza, zavatra tsy ampy (fanamboarana, fanitarana, fanaingoana sns) ... fa raha manatsara azy ireo dia mbola tiako indrindra izy io, raha vao miharatsy izany dia ho hitantsika .. .
Tsy fantatro raha sahirana aho sa inona, fa tsy tiako ny Gnome Shell na ny Unity, ary nanandrana aho, eh, nampiasaiko nandritra ny fotoana ela aho nefa tsy nisy, aleoko ihany ilay fijerin'ny androm-piainany, toa ny Gnome Classic na Xfce. Ary ny zavatra ratsy indrindra dia ny Ubuntu miaraka amin'ny Gnome Classic no nitia ahy ary tsy maintsy nifindra tany Xubuntu aho.
Xubuntu dia mandeha tsara ...
Aleoko ny Lubuntu fa ny manandrana ny loko xD
Tamin'ny fotoana nanandramako voalohany an'i Gnome dia tsy hitako fa mahasadaikatra izany, ary mahafinaritra raha afaka mamaly an'i Chats nefa tsy manokatra ny varavarankely 🙂 Saingy amin'ny solosaina toa ahy dia miadana kely izy. Tsy mampaninona ahy ny mampiasa extensions, fa te-hahita ny Gnome Tweak Tool tafiditra ao amin'ny tontonana fanaraha-maso Gnome 😐
Araka ny nolazain'izy ireo teo aloha, rehefa mihalehibe ny Gnome, dia safidy tsara tahaka ny teo aloha ho an'ny rehetra izany, ny olana dia miseho nefa ho an'ny maro, na vao vao teraka izy ireo na amintsika izay tsy manam-potoana intsony hanaovana andrana an'io na izatsy dia mila tontolo mafy orina sy milamina hiasa mivantana, mamela ny fanamboarana sy ny fitsapana amin'ny fotoana malalaka (raha misy).
Toa tsara amiko ny miova, tsy tokony hisy hijanona maharitra, fa ny fiovana mahery vaika dia hitarika antsika hanova ny mpampiasa ho amin'ny zavatra matotra kokoa, izay milamina sy milamina ny rano.
Toa tsara amiko izany ... mahavariana ... tsy mila ny bokotra mampihena sy mampitombo koa aho, tsindrio indroa aho ary ampitomboiko, tsindrio havanana ary ahena, ataoko ihany ny bokotra akaiky, manana pc tsy dia matanjaka aho Hararaotiko bebe kokoa izany raha manana efijery fanaraha-maso aho
xtremox dia hoy izy:
Izaho manokana tsy tiako izany fa halako ny firaisan-kina, ho an'ny netbook dia hampiasa gnome 3 aho fa tsy unitity ary amin'ny birao dia mampiasa kanelina misy lxde aho na tsia e17 tiako ny fampisehoana ananan'ireto farany ary ny gui dia mahatalanjona an'ny manana endrika lehibe
Valiny amin'ny xtremox
Na dia tsy miombon-kevitra aminao momba ny GNOME Shell aza aho, dia marina fa mbola maitso maitso amin'ny lafiny maro. Tsara homarihina fa rehefa natao ny fanovana ny andian-tsarimihetsika KDE 4.x dia nisy ihany koa ny tabataba, raha toa ka miasa na tsia ilay interface dia raha io na io no nanjaka fa ny KDE kosa birao voalohany. ary iray amin'ireo tsara indrindra. Mino aho fa mandalo zavatra mitovitovy amin'izany ny GNOME Shell, fa tsy toy ny KDE sy ny fahitana ny fiantraikan'ny haino aman-jery finday, ny làlan-kaleha nalain'ny GNOME Shell dia mikendry ny hanana tontolo iainana manara-penitra kokoa na mitovy aminy mba hananana fiovana eo amin'ireo tsara fanahy sy sariaka.
Raha ny marina, ho an'ny KDE dia misy Shell (BE: Shell) izay mahaliana toa be an'i Cinammon (fork of the gnome Shell) ary na dia ny GNOME Shell aza, noho izany dia mila manontany tena ianao, misy telefaona marani-tsaina sy fitaovana hafa ( mahatakatra Android sy iOS) mametraka ny feon'ny fanamarinana ny tontolon'ny birao ?.
Fiarahabana am-pitiavana ary salama tsara ianao.
Miarahaba anao Jorge:
Mazava ho azy fa azoko ny fomba fijerinao ary izaho dia anisan'ireo voalohany nitsikera mafy ny KDE 4.0, tsy dia hoe firy ny fijeriny fa ny fihetsiny. Saingy tsy miombon-kevitra aminao momba zavatra iray aho (toa ny tsy itovizanao hevitra amiko amin'ny zonao rehetra), heveriko fa tsy sariaka mihitsy i Gnome Shell, farafaharatsiny tsy voalohany. Amin'ny farany, ny KDE dia mizara ny singa mitovy amin'ny Windows (tsy lazaina intsony ny Metro) na ny mifamadika amin'izany, noho izany ny fiovana ho an'ny mpampiasa vaovao dia tsy mampivadi-po mihitsy.
Misaotra nijanona ary nanome hevitra.
Raiki-pitia tamin'ny GNOME 3 / Shell aho rehefa nampiasa azy io tamin'ny Linux Mint 12 izay karazana hybrid teo anelanelan'ny GNOME 2 sy Cinnamon: GNOME Shell dia toa ahy ankehitriny ilay akorany tena ahazoana aina sy azo ampiharina ary raha ny marina dia nampiditra zavatra vitsivitsy tamin'ny ahy aho Birao KDE, ohatra:
(Azoko hazavaina fa manana ny bara fiasa eo amin'ny farany ambany)
1. rehefa atosika mankany amin'ny zoro ny totozy. havia ambony ny fampisehoana windows dia mandeha ho azy (ny vokan'ny macOS exposé malaza)
2. rehefa manosika ny totozy mankany amin'ny zoro. Eo ankavanan'ny farany ambany dia mampihetsika ny fandefasana birao (4 amin'izao fotoana izao) izay azoko atao ihany koa ny mampihetsika miaraka amin'ny Super-S mitambatra (toy ny tao amin'ny Unity raha nampiasa ny Ubuntu 11.04 sy 11.10) aho.
Ho vonona amin'ny fotoana fohy ny kanelina 1.6